Bogga ugu weyn / blog / Hal Musqul Ayaa Ku Filan, Maxaad Ugu Baahan Tahay Laba Musqulood Dalka Shiinaha?
2021 / 04 / 12 Qoondayntablog 6603 0
Qurxinta musqusha waa edbinta in
Mar haddii jiritaanka naqshad aan macquul ahayn
waxay saameyn ku yeelan doontaa tusmada farxadeed ee nolol maalmeedka.
Keen dhib badan oo aan loo baahnayn.
Qoysaska leh dad aad u tiro badan.
Haddii aysan jirin laba musqul
Waa lagama maarmaan in la wajaho ifafaalaha in
Kahor intaadan kicin subaxa hore iyo intaadan seexan habeenkii
Musqusha ayaa la kulmi doonta dhibaatooyinka ugu sarreeya subixii iyo fiidkii.
Iyo geeddi-socodka isticmaalka xoogga leh, the
Qolka musqusha waa wax aan macquul aheyn in laga gudbo aagga.
Qoysku waxay xoogga saari doonaan isticmaalka saxanka iyo musqusha.
Waxa kale oo saf u jira meesha lagu maydho iyo musqusha.
Si kor loogu qaado tayada nolosheena
fikradda kala tagga qoyan iyo qalalan ayaa caan noqotay.
Laakiin waxaa soo baxday in
Kala qoyan oo qallalan iyadoo aan musqusha lakala saarin.
Maxaad sidaa u tiri
Aynu eegno qaabka guud ee musqusha guriga!
Guud ahaan, waxay u egtahay sidan ……
Ama qaab laba jibbaaran oo kale ah
Aagga musqusha, aagga lagu maydho iyo aagga musqusha ayaa si dhex-dhexaad ah loogu qaabeeyey isla goobtaas, oo kaliya albaabka muraayadda ah ee aagga qubayska ayaa u adeegta sidii qayb-qayb fudud, taas oo fiican haddii aad keligaa nooshahay, laakiin mar haddii ay ku hoydaan laba ilaa saddex qof Waxay ku soo beegmaysaa degdegga subaxa, qof baa tagaya musqusha, ka kalena waa inuu si walaac leh u sugaa.
Dabcan, si loo wanaajiyo waxtarka isticmaalka musqusha, dadku kamay qaadin saxanka madaxbanaanida habka. Laakiin wali waa isku mid, waxaad dooneysaa inaad si fiican u qabeysato, banaanka ka qeylinta "Waxaan u baahanahay inaan aado musqusha" ……
Dhaqankani ma aha mid ku habboon "kala qoqobnaan iyo kala qallalan" - Qubayska ka dib biyaha musqusha waxay qaadan doonaan waqti dheer in la kala firdhiyo, oo la qoynayo aagga musqusha; Bakteeriyada musqusha ayaa sidoo kale wasakheyn doonta tuwaalada iyo dharka musqusha.
Haddaba, sidee loo xalliyaa dhibaatadan? Aynu tixraacno xikmadda adeegsiga musqulaha Japan.
Saddex nooc oo musqulo kala duwan ah
Ugu horreyntii, musqulaha Jabbaan waxay asal ahaan isticmaalaan "kala-goys saddex-geesood ah," kala-soocidda saddexda qaybood ee maydhashada, maydhashada, iyo musqusha
Iyadoo aan loo eegin nooca reerka, mid ka mid ah fikradaha midaysan ee ugu muhiimsan ayaa ah in qolka musqusha uu madax bannaan yahay! Kaliya ma saameynayso ku habboonaanta guud ee isticmaalka, laakiin sidoo kale way ka madax bannaan tahay meelaha kale.
Dabcan, qoysaska qaar sidoo kale waxaa ku jira qolka dharka lagu dhaqdo, si “saddexda nooc ee kala tagga ah” ay u noqdaan “afar nooc oo kala tag ah”. Isla goobtaas, qubeyska, weelka lagu dhaqo, qolka dharka lagu dhaqdo iyo musqusha waa la isku daray oo isma saameeyaan.
Faa'iidada qaabeynta noocan oo kale ah waa inay sameysato khad isku xiran, oo si wax ku ool ah u xalliya xaddidaadda meel yar oo guri ah isla markaana buuxisa baahiyaha adeegsiga kaladuwan ee qoyska.
Qabanqaabada qolka musqusha ee madaxbanaan ee Jabbaan, maahan oo keliya meel yar oo jidhku si xor ah ugu soo jeesan karo, laakiin sidoo kale inuu la qabsado tuwaalka waraaqda, tuwaalada, muraayadaha, iyo xitaa saxamada, sameynta adeeg musqul oo hal-joogsi ah.
Laba duub oo shukumaan xaashi ah ayaa lagu dhejiyaa rakibidda qaybaha, oo ku habboon meeleynta taleefannada gacanta ama walxaha kale ee yaryar, oo ka tarjumaya faahfaahinta daryeelka "dadnimo".
Iyadoo la raacayo mabda'a ah inaan la luminin booska, qaybta kaydinta ee ka dambeysa musqusha ayaa sidoo kale xallin karta dhibaatooyinka keydinta ee lagama maarmaanka ah.
Isticmaalka biyaha dib loo rogay ee lagu sifeynayo musqusha kaliya ma dabooleyso aag yar, laakiin sidoo kale waa qaab jawi ku habboon jawiga iyo keydinta tamarta.
Marka, maxaa ka yaabiyay nashqadeeyayaasha Jabaan waa: maxaan ugu baahan nahay laba qol oo ku yaal Shiinaha?
Waxaa jira habab badan oo kala duwan oo loo diyaariyo musqusha, laakiin fikrad kasta oo cusub waxaa loogu talagalay hagaajinta tayada nolosha dadka. Ilaa iyo inta aad ka jebinayso fikirka adag, sida ku cad caadooyinka nolosha qaabeynta macquul ah, way ka raaxo badan tahay adeegsiga!
Hore:: Musqusha Guriga, Musqusha Darbiga Musqusha? Mise Musqusha Musqusha? Next: Musqusha Dadyowga Kale Maxay Markasta Ugu Fiicanyihiin?
Qurxinta Qolka Musqusha Ee 16ka "Faahfaahinta Eebbe", Samee Wax Sax ah, ...
Kan Dunida Ugu Horeeya! Fadhi-Amni oo Faa'iido Leh-Inka Musqusha, Si Aad “...
Musqulahaan sidoo kale waa kuwo aad u qiimo badan, Dhammaantood ma aragtay?
2021 / 04 / 12 6664
2021 / 04 / 12 5585
2021 / 04 / 11 5996